Madaxweyne Farmaajo oo u magacaabay guddoomiye cusub maxkamada sare ee dalka |
Madaxweyne Farmaajo oo u magacaabay guddoomiye cusub maxkamada sare ee dalka
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xil ka qaadis ku sameeyay guddoomiyaha maxakamadda Sare ee dalka Mudane Ibraahim Iidle Suleymaan, waxaa uuna xilkaas u magacaabay Garyaqaan Baashe Yuusuf Axmed.
“Aniga oo ka jawaabaya ballan qaadkeygii ahaa in la helo nidaam garsoor oo ku dhisan hufnaan iyo caddaalad, waxaan maanta xilka Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee dalka u magacaabay Baashe Yuusuf Axmed. Waxaan Guddoomiyaha cusub u rajeynayaa inuu kasoo dhalaalo hawlaha loo igmaday.” ayuu yiri Madaxweynaha.
Madaxweyne Farmaajo ayaa faray Golaha Shacabka iyo Xukuumadda in ay soo dhameystiraan Golaha Adeegga Garsoorka, lana waafajiyo dastuurka ku-meel-gaarka ah iyo sharciga dhismaha golaha adeegga garsoorka si dib u habeyn dhab ah loogu sameeyo hay’adaha garsoorka dalka.